Mahdi Guuleed oo Odayaasha Gobollada Waaqooyi kala hadlay Arrimaha doorashooyinka - Awdinle Online
Mahdi Guuleed oo Odayaasha Gobollada Waaqooyi kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa kulan Galabta la qaatay qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ee ku sugan Magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay Arrimo la xiriira doorashooyinka Xildhibaannada labada Aqal ee kasoo jeeda Gobolada Waqooyi iyo sidii ay ugu dhici labeyd jawi nabdoon.
“Sharaf ayay ii ahayd in aan maanta kulan qado iyo is xog wareysi ah la yeesho odayaasha dhaqanka gobollada woqooyi ee Somaliland. Waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada xildhibaannada ka soo jeeda Somaliland ugu dhici lahayd hab xasilloon oo xor iyo xalaal ah ayuu yiri ” Mahdi Guuleed.
Kulankaan ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi oo kasoo jeeda Gobolada Waqooyi iyo Villa Soomaaliya ay isku khilaafsan yihiin guddiyada loo Magacaabay doorashooyinka Xildhibaannada Gobolada Waqooyi ee Soomaaliland.
Previous articleMaamulka Jubbaland oo heegan geliyay Ciidamadiisa
Next articleVilla Somalia dalbatay in la bedelo mid kamid ah Guddiga doorashooyinka ay soo gudbiyeen Jubbaland